Kedu ihe bụ ikike m dị ka onye njem ma ọ bụrụ na m kagburu ụgbọ elu m ma ọ bụ gbue oge? | Akụkọ Njem
Mgbe anyị gara ọdụ ụgbọ elu iji ụgbọ elu, ọ nwere ike ịbụ na ọ na-egbu oge ma ọ bụ kagbuo. Ọ bụ ihe ijuanya na-adịghị ahụkebe karịa ka ọ dị na nke ahụ nwere ike ime onye ọ bụla. Yabụ kama ịtụ ụjọ, ọ dị mfe ịma tupu oge eruo ihe ikike anyị dị ka ndị njem na ihe a ga-eme iji dozie nsogbu nke ihe ndị a na-atụghị anya ya. Rịba ama!
Ma ọ bụ n'ihi ọgbaghara nke ndị njikwa, ndị ọrụ nchekwa nchekwa, mmejọ ụgbọ elu ma ọ bụ maka ebumnuche ọ bụla, ọ dị mkpa ịmata ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ụgbọ elu gị gaa ebe ị na - enwe nsogbu.
1 Kedu ikike ị nwere dị ka onye njem?
1.1 Ikike ịmara
1.2 Ikike nkwụghachi ma ọ bụ ụgbọ njem ọzọ
1.3 Aka nri
1.4 Ikike ịkwụ ụgwọ
1.4.1 Mgbakwunye ụgwọ
1.4.2 Mgbanwe klaasị
1.4.3 Kedu mgbe enweghị ụgwọ iji kwụọ ụgwọ?
2 Kedu ihe m ga-azọrọ na ụgbọ elu akagburu?
3 Flightgbọ elu m egbuola oge, ugbu a gịnị?
4 Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịchefu ụgbọ elu njikọ gị n'ihi igbu oge ma ọ bụ kagbuo?
Kedu ikike ị nwere dị ka onye njem?
Mgbe ihe mere nke na - egbochi ụgbọ elu ịpụ dị ka ezubere, Iwu Spanish (nke ndị Europe na-achịkwa) na-egosi usoro ikike nke onye njem ahụ nwere ike ịrịọ: ikike nkwụghachi ma ọ bụ ụgbọ njem ọzọ, ikike inweta ozi na ikike ịkwụ ụgwọ na nlebara anya.
Ndị ọrụ ụgbọ elu kwesịrị ịkọ ndị ahịa ha ikike ha nwere dị ka onye njem mgbe enwere akwụkwọ karịrị tiketi, ịkagbu ụgbọ elu ma ọ bụ igbu oge.
N'ụzọ dị otú a, ụgbọ elu ga-etinye ọkwa na ọnụ ụzọ mbata ma ọ bụ na ebe ndenye ego ebe ha chetara na ndị njem nwere ike ịrịọ maka ederede ebe ikike ha pụtara. N'otu aka ahụ, ị ​​ga-enyerịrị akwụkwọ a edeturu ma nye data nke ahụ maka ọrụ maka nrube isi na iwu, nke dị na Spanish bụ Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchedo Ọdụ ụgbọelu (AESA).
Ikike nkwụghachi ma ọ bụ ụgbọ njem ọzọ
Ọ bụrụ na akagbuola ụgbọ elu ahụ, egbuola oge karịa awa ise ma ọ bụ jụọ ya ịbanye Nwere ike ịrịọ nkwụghachi nke ụgwọ tiketi ma ọ bụ njem ọzọ iji ruo ebe ga-ahapụ ngwa ngwa o kwere mee.
Achọrọ ikike nke nlebara anya mgbe ọ na-egbu oge karịa awa abụọ, agọnarị ịbanye ma ọ bụ kagbuo ụgbọ elu ahụ. N'echiche a, ụgbọ elu kwesịrị inye ndị njem ya nri na ihe ọ drinkụ drinkụ zuru oke, nnabata na njem njem gụnyere na site n'ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụrụ na a manyere ha ihi ụra na ala na oku ekwentị 2 ma ọ bụ ụzọ nkwukọrịta ndị ọzọ.
Ikike ịkwụ ụgwọ
Onye njem ahụ nke igbu oge ụgbọ elu na-emetụta karịa awa 3, ịkagbu ma ọ bụ ịjụ ịbanye nwere ike ịrịọ ụgbọelu maka ịkwụ ụgwọ sitere na euro 250 na 600 dabere na ebe ogologo njem ahụ dị ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ ụgbọ elu intra ma ọ bụ obodo ọzọ.
Na mgbakwunye na ụgwọ a gosipụtara na ụkpụrụ, ọ bụrụ na onye njem ahụ tụlere na ezughị Nwere ike ịrịọ n'ụlọ ikpe maka ịnwekwu ụgwọ.
Mgbe ụfọdụ n'ihi ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ụgbọ elu ahụ ga-ebufe onye njem na klaasị nke na-adabaghị na tiketi ha zụtara. Ọ bụrụ na ị gbanwee na klaasị azụmaahịa site na ndị njem, ị gaghị enwe ike ikwu. Y’oburu na ngbanwe ahu diri ndi di ala, a ghaghi ikwughachi ugwo. Yabụ, ị ga-enwe ikike a akụkụ nke ego nke tiketi eweghachiri gị.
Linegbọ elu ahụ ga-akwụghachi gị 30% nke ọnụahịa tiketi maka ụgbọ elu ndị na-agaghị agafe kilomita 1.500, 50% maka ụgbọ elu ndị obodo na-eme karịa kilomita 1.500 na ndị ọzọ niile nọ n'etiti 1.500 na 3.500 kilomita. Onu ogugu ga-abụ 75% maka ụgbọ elu ndị ọzọ.
Kedu mgbe enweghị ụgwọ iji kwụọ ụgwọ?
Nanị ọnọdụ nke ụgbọ elu na-enweghị ọrụ iwu ọ bụla iji nye ụdị ụgwọ ọ bụla bụ ma ọ bụrụ na ịkagbu ụgbọ elu emeela n'ihi ihe ndị dịka mgbawa ugwu mgbawa, ọnọdụ ihu igwe dị oke ma ọ bụ iku.
Kedu ihe m ga-azọrọ na ụgbọ elu akagburu?
Nkagbu nke ụgbọ elu na-egosi na ụgbọelu ahapụghị ọdụ ụgbọ elu ahụ ma ọ bụ na akwụsịla ụzọ ahụ. Enwere ike ịkọ nke a na ihe kpatara ya (ihe omume ihu igwe na-adịghị mma) ma ọ bụ ihe kpatara ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya. Dabere na ihe kpatara ya, dịka onye njem metụtara nhichapụ, ịnwere ike ịnata ma ọ bụ ghara ịnata ụgwọ ego.
Ọ bụrụ na ihe kpatara ịkagbu aha bụ maka ụgbọ elu, ị nwere ike ikwu nkwụghachi nke tiketi ma ọ bụ njem ọzọ, yana nlebara anya n'oge ichere na ịkwụ ụgwọ ego. Agbanyeghị, ikike ikpeazụ a gosipụtara ụfọdụ:
Ọ bụrụ na ụgbọ elu ahụ kọọrọ nkagbu nke ụgbọ elu ọ dịkarịa ala ụbọchị 7 tupu oge eruo ma nye onye ọzọ nke na-ahapụ ọtụtụ oge 1 elekere tupu ọ bịarute ebe ọ na-erughị awa 2 n'oge na-adịghị anya banyere oge mbata echere.
Ọ bụrụ na ụgbọ elu ahụ gwara gị n’etiti izu abụọ na ụbọchị 2 tupu ịkagbu ụgbọ elu ahụ ma nye gị njem ọzọ nke gafereghị awa 7 tupu oge eruo maka ọpụpụ, ma ọ bụ 2 awa tupu oge eruo maka ịbịaru ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ụgbọ elu ahụ nwere ike gosipụta na ịkagbu bụ n'ihi ihe ndị pụrụ iche.
Ọ bụrụ na ụgbọ elu gwara gị banyere nkagbu ọ dịkarịa ala izu 2 tupu oge ịpụ.
Ọ bụrụ na enweghị ọnọdụ ndị a mere, onye njem ahụ ga-enwerịrị ịnata ụgwọ ego.
Flightgbọ elu m egbuola oge, ugbu a gịnị?
Ọ bụrụ na ụgbọ elu gị na-ata ahụhụ ogologo oge, ị ga-amararịrị na ị nwere ikike ilebara anya na ọdụ ụgbọ elu na ịkwụ ụgwọ ego. Agbanyeghị, iji rịọ ikike ndị a, a ga-achọ ọnọdụ ndị kacha nta.
Banyere ebe obibi nke na-eche banyere ikike nke nlebara anya, ma ọ bụrụ na ịkagbu ya, a ga-enye ya naanị ma ọ bụrụ na ọpụpụ nke ụgbọ elu ọzọ dịkarịa ala 24 awa mgbe ọpụpụ nke ụgbọ elu mbụ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na igbu oge nke awa 5 ma onye ahịa ahụ ahọrọ ịnọdụ na ala, ụgbọ elu ahụ ga-akwụghachi ụgwọ ọnụahịa niile nke tiketi kwekọrọ na akụkụ nke njem ahụ emebeghị na akụkụ nke na-emebeghị na, ọ bụrụ na ọdabara, ụgbọ elu laghachi n'ọnọdụ ya.
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịchefu ụgbọ elu njikọ gị n'ihi igbu oge ma ọ bụ kagbuo?
Ọ bụrụ na ndị njem agụọ akwụkwọ ụgbọ elu abụọ na ụgbọ elu dị iche iche wee tụfuo njikọ ahụ n'ihi ịkagbu ma ọ bụ igbu oge nke ụgbọ elu mbụ, a gaghị akwụghachi nke abụọ. Maka nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya idekọ ụgbọ elu abụọ na otu ụlọ ọrụ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị oke ọnụ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Kedu ihe bụ ikike m dị ka onye njem ma ọ bụrụ na m kwụsị ụgbọ elu m ma ọ bụ gbue oge?
Ulan Bator, njem nlegharị anya
Obodo kacha mma ịga leta izu ụka